OS နှင့် application မှထောက်လှမ်းနည်း — MYSTERY ZILLION
OS နှင့် application မှထောက်လှမ်းနည်း
August 2014 in Daily Life
Microsoft ရဲ့ Windows OS သုံးတဲ့ Computer
တွေနဲ့ Apple ရဲ့ Mas OS သုံးတဲ့ Computer တွေကို
အဲဒီ Company ကဘယ်လိုနည်းနဲ့ထောက်လှမ်းလဲသိချင်လို့ပါဗျ။
There is no legal right to do that. Even for the bug report, user's confirmation is needed for sending system and user information with bug report.
သူတို့ရဲ့ OS သုံးစွဲမှုက ဘယ်နှစ်လ အတွင်းမှာသုံးစွဲသူ ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျတော့
ဘယ်က Data တွေကို အခြေခံသလဲ မူတည်မယ် အဓိကကတော့ Data ရနိုင်တာက Traffic နဲ့ Sales Data ၂မျိုးပဲရှိတယ်။ Sales ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Pirate Usage တော့ အဲဒီကနေ မရနိုင်ဘူးပေါ့။ Traffic မှာ Web Traffic တွေရဲ့ User Agent တွေကို Survey လုပ်ပြီးတော့ Data Collect လုပ်တာရှိမယ် Mobile တွေဆိုရင် Telecom တွေကနေလည်း Data ရနိုင်တယ်။ ဒါကအလွယ်ပြောတာ နမူနာအနေနဲ့ netmarketshare ရဲ့ Methodology မှာ သူတို့ဘယ်လို Data Clean လုပ်တယ် အမှားဘယ်လောက် ပါတယ်လို့ခန့်မှန်းတယ် ဖတ်ကြည့်ပါ။
Wiki ထဲက Usage share of operating systems လိုမှာလည်း အသေအချာ ဖတ်ကြည့်ရင် Data ဘယ်ကရတယ် ဘယ်လို Collect လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ Method Data ပါပါတယ်။ အများအားဖြင့်ကတော့ ယုံကြည်ရတဲ့ Quantitative Research Company တွေကပဲယူပြီး အခြေခံပါတယ်။